रोज्गार Archives - Page3of3- khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
अमेरिका भिसा आवेदन गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट, लालपूर्जा नचाहिने
Posted On May 17, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
काठमाडौं— काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसा आवेदकका लागि कागजी प्रक्रिया घटाउने भएको छ। बैंक स्टेटमेन्ट, लालपूर्जा लगायतका कागजात आवश्यक नपर्दा अमेरिका आवेदन अब सहज हुनेछ। दूतावासकाअनुसार यो नयाँ नियम जेठ १९ गतेबाट पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसा आवेदन गर्नेहरुमा लागू हुनेछ। ‘आवेदकहरूलाई सम्भावित छलकपटबाट जोगाउनका साथै उनीहरूको पैसा र समय बचत होस् भनी उनीहरूले… Read more »
लक्ष्मी बैंकमा रोजगारीको सुवर्ण अवसर !
Posted On May 16, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
लक्ष्मी बैंकमा रोजगारीको सुवर्ण अवसर ! सहायक र अधिकृतस्तरका ४१ जना कर्मचारीको आवश्यकता ! Online बाट Apply गर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला http://bit.ly/1qmsLYz
Posted On April 10, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई दरबन्दीमै रोजगारी दिने भएको छ। अब बर्सेनि दीक्षान्त समारोहमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले गुनासो गर्ने छैनन्। किनभने प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयमा स्वर्ण पदक तथा नगद पुरस्कार प्राप्त गरेपछि विद्यार्थीको एउटै प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, ‘अब हामीले यो पदक भित्तामा झुन्ड्याएर सजाउनेछौं। र, रोजगारीका लागि स्वदेश तथा विदेशमा भौंतारिनेछौं।’ nepalipatro-nagarik… Read more »
स्टाफ कलेजमा जागिर अवसर, पिआर र ग्रीनकार्ड होल्डरले अावेदन दिन नपाउने
Posted On April 7, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
काठमाडौं— आकर्षक तलब सुविधा प्रदान गर्ने सरकारी निकाय नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जाउलाखेलले अधिकृत सहित १२ पदका लागि आवेदन मागेको छ। नीतिगत प्रशासनिक अनुसन्धान तथा सरकारी कर्मचारीलाई तालिम दिने प्रतिष्ठानले विदेशी मुलुकको पिआर, ग्रीनकार्ड भएका व्यक्तिले आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। पदपूर्ति सूचनाअनुसार प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत मध्ये ४ खुलाबाट तथा १ महिला, १… Read more »
कारएएर ओप्पोर्तुनितिएस विथ USAID
Posted On March 31, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
के तपाईं इन्तेर्न्शिप को खोजी म हुनु हुन्छ ? एदी हुनु हुन्छ भने उसैड लए विभिन्न तह क इन्तेर्न्शिप प्रोग्राम लीयारआ आको छ । आधिक जानकारी को लागि हेर्नु होस https://www.usaid.gov/nepal/careers
पुनःनिर्माण कार्यक्रममा २५७१ इन्जिनियरलाई जागिर अवसर
Posted On March 18, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
काठमाडौं— शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भूकम्पीय आवास पुनः निर्माण कार्यक्रम तथा भूकम्प आकस्मिक सहायता आयोजनाका लागि २५ सयभन्दा बढी इन्जिनियरका लागि जागिर खुलाएको छ। इन्जिनियर, सब इन्जिनियर तथा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदका लागि आवेदन माग गरेको हो। विभागले यसअघि इन्जिनियर र सब इन्जिनियर पदमा क्रमशः ४६ र ७१ जना मागेको थियो। सो विज्ञापनमा… Read more »
वार्षिक३३ लाख कमाउ नसक्नेले बेलायत बस्न नपाउने
Posted On March 13, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
लण्डन–वार्षिक ३३ लाख रुपैयाँ कमाउन नसक्ने व्यक्ति अब बेलायतमा बस्न नपाउने भएका छन्। बेलायतले सो सम्बन्धी कानून बनाउँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। सो कानून पारित भएपछि ठूलो संख्यामा तेस्रो मुलुकबाट गएका र मध्यम आए भएका व्यक्ति प्रभावित हुनेछन्। सो कानूनका अनुसार वार्षिक ३३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भन्दा कम आए भएका गैर युरोपियनलाई आफ्नो… Read more »
लोकसेवाद्वारा खरिदार पदमा १४ सय बढी दरखास्त अाह्वान
Posted On March 9, 2016 Author siteadmin Category रोज्गार.
लोकसेवा आयोगले खरिदार पदमा जागिरका लागि १४ सय भन्दा बढी दरखास्त आह्वान गरेको छ। अप्राविधिक तर्फ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदका दरखास्तका लागि आयोगले बुधबार सूचना जारी गरेको हो। आवेदन फारम अनलाइन मार्फत् भर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। source setopati